Pěnkavčí vrch Izintaba Giant Izintaba ezinkulu, iJizera Mountains, iPharadesi iPharadesi
IkhayaPěnkavčí vrch Izintaba Giant
Pěnkavčí vrch Izintaba Giant
24.5.2018 by PetrPikora.com
I-Pěnkavčí vrch (i-German Pinkenberg) iyinhloko e-Czech Republic elele empumalanga yezwe zintaba.
I-Pěnkavčí ingenye yezimfudumalo zenyakatho futhi ngaseningizimu-mpumalanga ukusuka entabeni ephakeme kunazo zonke zeSněžka Krkonose Mountains. Kuthi cishe ngamakhilomitha angu-5. Isikhwama esingajulile esinokuphakama kwamamitha angu-1040 sihlukanisa nomuzi osenyakatho-ntshonalanga we-Pink Mountain. Ngaseningizimu-ntshonalanga kuya esikhwameni esihlukanisa i-Red Hill eseduze, i-canton isivele isikhulu futhi umthambeka usukhulu kakhulu. Isikhwama sisezingeni eliphezulu cishe ngamamitha angu-900. Amanye amathafa asePěnkavčí intaba futhi aphakeme kakhulu.
Ngaphandle kweNtshonalanga naseningizimu-ntshonalanga, eduze kweziqongo, i-Pevkavci Hill ihaqwe izigodi ezijulile. Enyakatho ijikelezwe ngamanzi emzimbeni we-Messner's Gorge - Jelení potok - Mala Upa, egijima e-Great Upper ngakolunye uhlangothi lweRed Hill eliseduze. Ngezansi komthambeka oseningizimu wegquma ugeleza ngaphezu kweNtaba Ephezulu.
Ihlathi lase-Spruce liphazanyiswa ama-glades amaningi. Emaphethelweni aseningizimu-ntshonalanga kunamadlelo eduze nezintaba zezintaba ezindaweni zasePěnkavčí Vrch noJanovy Boudy.
Indawo yasePěnkavčí inqamuzana nemigwaqo yezimpawu ezihlukahlukene. Into ebaluleke kakhulu indlela eholela kusuka Portášových Bud John Wamadokodo efinyelela eningizimu kusuka phezulu futhi eliholwa ophuzi-kwasho yokhalo umzila kuya confluence Śnieżka up. Uphawu lwesibhakabhaka oluhlaza luyehla emthambekeni osenyakatho ukusuka ePortášovy Bud kuya eSpálený Mlýn.
Ngo eduze sehhashi phakathi Pěnkavčím futhi Red Hill kuyinto edolobhaneni entabeni Pěnkavčí Hill noJohane Wamadokodo, eduze sehhashi entabeni, khona-ke amaqembu Rose Bud Portášových. Ikakhulukazi emathafeni asempumalanga nasempumalanga kunezindawo ezizungezile iVelka Upa (ingxenye yangakini yePec pod Snezkou) naseMala Upa
Phakathi kukaVelka Upa noPortášové Boudy, indlela yokusebenza yomsebenzi iyasebenza. Kunezinkampani eziningana ezincane ezithuthukisiwe ezakhiweni.
Okuthunyelwe kwangaphambilini Iziqhingi Kravíra Giant Mountains
esihlokweni esilandelayo PEC pod Sněžkou